Socodka Qishka xaaskaaga Iyadoo Spyware Cell Phone! Xidhiidh aan u baahan Trust, Faith, Rajaynaynaa iyo ugu muhiimsan jeclaada. Out of kuwaas oo dhan, trust waa dareen ugu xadgudbaan, maxaa yeelay, in kastoo aanay jirin koox dooneysa in ay jebiyaan trust qof ee, dadka aakhirka qof walba ku dhowaad khiyaaneeya. Heerka khiyaanay ka mid ah lamaanayaasha sare. Sidaas la […]
Sida loo Mobile Phone Free?
Isha ku hay Shaqada shaqaalaha taleefanka gacanta Socodka App!
Ma waxaad la Yaabteen inta badan ku saabsan waxa shaqaalaha yihiin ilaa on telefoonada shaqada? Ma waxaad ka cabsi laga yaabaa in isticmaalka tilifoonka shaqo sababo shakhsi? Ma rabtaa in aad si ay u awoodaan in ay isha ku hay ay hawl telefoonka gacanta? Sidee baad jeclaan lahayd in lagu jaajuuso telefoonada shaqada aad shaqaale ee aan […]
Sida loo Hack Whatsapp?